iPhone သို့မဟုတ် iPad ကိုချိတ်ဆက်မိသောအခါ Photos application ကိုအလိုအလျောက်ဖွင့်ခြင်းမှကာကွယ်ပါ ငါက Mac ပါ
OS X ဗားရှင်းများနှင့်ကျွန်ုပ်တို့ iPhoto အပလီကေးရှင်းသည်ဓာတ်ပုံနှင့်ဓာတ်ပုံဓာတ်ပုံစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်ကိုမည်သို့ပေါင်းစပ်လိုက်သည်ကိုမြင်တွေ့ခဲ့ရသည်။ ဒါကြောင့်လည်း သတင်းတစ်ခုစီးရီးရောက်ရှိလာခဲ့သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ဓာတ်ပုံများကိုတည်းဖြတ်ရန်အခြားတတိယပါတီအက်ပလီကေးရှင်းများမှတိုးချဲ့မှုများကိုပေါင်းစပ်။ ဖြစ်နိုင်သည့်တိုးတက်မှုအမျိုးမျိုးအပြင် interface နှင့် ပါတ်သက်၍ ဒီ entry အတွက်.
သို့သော်၊ Apple သည်မကြာသေးမီက interface ကိုမထင်မှတ်ထားသောကန့်သတ်ချက်များသို့လွယ်လွယ်ကူကူရှင်းရှင်းလင်းလင်းထားပြီးအသုံးပြုသူကိုချန်ထားသည့်အလေ့အကျင့်ကိုကျွန်ုပ်တို့သိပြီးဖြစ်သည် အုပ်ချုပ်ရေးအတွက်အနည်းငယ်သာနေရာ တိကျသောလျှောက်လွှာ၏။ ဓာတ်ပုံများနှင့်အတူတူပင်ဖြစ်သည်။ အချို့သောရွေးချယ်စရာများဆုံးရှုံးခဲ့ရပြီး၎င်းတို့ထဲမှတစ်ခုသည် iPhone, iPad သို့မဟုတ် iPod Touch ဖြစ်သည့်ကျွန်ုပ်တို့၏ iOS ထုတ်ကုန်များကိုကျွန်ုပ်တို့ဆက်သွယ်သောအခါ application ကိုအလိုအလျောက်စတင်ခြင်းမှတားဆီးနိုင်သည်။
အထက်ပါထုတ်ကုန်များထဲမှတစ်ခုကိုမဆက်သွယ်မီ iPhoto သည်အလိုအလျောက်စတင်လိမ့်မည် ကျွန်တော်တို့ကိုအောက်ပိုင်းလက်ဝဲအတွက်ဖြစ်နိုင်ခြေထားခဲ့တယ် ကနေပြတင်းပေါက်ဖော်ပြသည် အလိုအလျောက်ပြန်လည်မရ Device ချိတ်ဆက်မှုတစ်ခုစီတွင်ယခုမူကားထို option မရှိသေးပါ။ ကျွန်ုပ်တို့သည် Terminal မှတစ်ဆင့် command တစ်ခုမှတဆင့်ဓါတ်ပုံများကိုမဖွင့်ရန် system ကိုပြောရပါလိမ့်မည်။
ဤသို့ပြုရန်ကျွန်ုပ်တို့သည် Applications> Utilities> Terminal နှင့်သွားရန်လိုအပ်သည် အောက်ပါ command ကိုရိုက်ထည့်
defaults -currentHost သည် com.apple.ImageCapture ကိုရေးပါ disableHotPlug -bool ဟုတ်သည်။
ထည့်ပြီးတာနဲ့ application ကအလိုအလျောက်ကျော်သွားတော့မှာမဟုတ်ပါဘူး။ အခြားတစ်ဖက်တွင်မူဆိုလျှင်ကျွန်ုပ်တို့ဆုံးဖြတ်သည် ကျနော်တို့ပြန်ကန ဦး configuration ကိုသွားချင်တယ်ဆိုလိုသည်မှာ၎င်းသည် connection တစ်ခုစီနှင့်သက်ဆိုင်သည်ဆိုလျှင် command ၏အဆုံးမှတန်ဖိုးကို“ NO” ကို“ NO” သာပြောင်းလဲရန်လိုအပ်လိမ့်မည်။
defaults -currentHost သည် com.apple.ImageCapture ကိုရေးပါ disableHotPlug -bool NO
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ငါက Mac ကပါ » Apple » လဲ tutorial » သင်၏ iPhone သို့မဟုတ် iPad ကိုချိတ်ဆက်သောအခါ Photos app ကိုအလိုအလျောက်ဖွင့်ခြင်းမှကာကွယ်ရန်
ငါအဲဒါကိုအကောင်အထည်ဖော်မှာပါ၊ Mac ကိုကျွန်တော်ဖွံ့ဖြိုးဆဲအချိန်မှာအဆင်မပြေတာပါ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် Miguel Angel
Alberto Leon ဟုသူကပြောသည်
ဟယ်လို! ဒီ post အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ကျွန်ုပ်အတွက်အင်တာနက်အလုပ်လုပ်ပေးသောတစ်ခုတည်းသောဖြေရှင်းချက်ဖြစ်သည်
မတ်လတွင် Apple က ၁၂ လက်မ MacBook ကိုအဆင့်မြှင့်တင်မည်